Filtrer les éléments par date : jeudi, 26 avril 2018
jeudi, 26 avril 2018 20:56
Hetsika ho an’ny fiovana : Vory maro ny olona teto Antsirabe
Teo anoloan’ny Tsangambaton’ny fahaleovantena Antsirabe androany no nifamotoana ireo Solombavambahoaka ho an’ny fiovana sy ny vahoakan’i Vakinankaratra leo : jadona, fanamparam-pahefana, tsy fandriampahalemana, kolikoly, fahantrana, fangoronana ny taniny. Niteny ho azy ireo sorabaventy nolanjain’ny olona.
Tamin’ny 10 ora maraina no efa nanomboka vory ny olona, niandry ny fahatongavan’ireo Solombavambahoaka ho an’ny fiovana tokony ho tamin’ny mitatao vovonana. Santatra ihany ny androany fa hitohy amin’ny fotoana hofaritana manaraka ny hetsika.
jeudi, 26 avril 2018 20:31
Ambatondrazaka: Miantso ny vahoaka ho sahy hanilika ny jadona ny Herivelona ho an'ny fanovana
Vory maro tao amin'ny Kianja Maitre Zaka ny olona teto Ambatondrazaka androany alakamisy 26 aprily araka ny fampiantsoana nataon’ny Herivelona ho an'ny fanovana na teo aza ny ramatahora nataon'ny mpitondra ny Faritra Alaotra Mangoro.
Nilaza ny Ben'ny Tanàna Kaominina Ambohitsilaozana fa ankoatra ny fanohanana ny hetsika tarihin’ireo solombavambahoaka 73 dia maro ireo tsindry hazo lena mahazo ny mponina aty Alaotra Mangoro ka hitakiana ny fialàn'ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
jeudi, 26 avril 2018 20:06
Marc Ravalomanana: “Tsy izaho velively no hanongam-panjakana”
Tonga eto Mahajanga androany ny filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana. Nisy ny fifampiresahany mivantana tamin'ireo mpiara-dia aminy teny amin'ny Magro Mahajanga Be, nandritra izany no nampahafantarany ny fandehan’ny hetsik’ireo Solombavam-bahoaka ho an’ny fiovana miisa 73.
Nanambarany mazava fa mijanona eo amin'ny samy depiote ihany ny fiarahana misy eo amin'ny TIM sy ny MAPAR ho fanoherana ny fandaniana ny lalam-pifidianana. “Tsy misy idiran'ny antoko TIM io fiarahana eny amin'ny Kianjan'ny 13 mey io”, hoy i Marc Ravalomanana. Famangina manjo sy fiaraha-miory no antom-pijoroany teny amin'ny Kianjan'ny 13 mey.
jeudi, 26 avril 2018 20:05
Fianarantsoa: Famoriam-bahoaka miaraka amin'ny K3F
Hotanterahina ny zoma 27 aprily 2018 ny famoriana ny vahoakan'i Fianarantsoa sy ny Distrika manodidina amin'ny alalan'ny Komitin'ny Fahamarinana, Fandriampahalemana ary Fiadanana (K3F). Eo amin'ny kianjan'ny Fahamarinana na antsoin'ny rehetra hoe kianjan'ny Magro Ampasambazaha no hisian'izany manomboka amin'ny 8 ora maraina.
Hitondra fitenenana mandritra izany fotoana izany sy manohana ny hetsika ny ankolafim-pikambanana sy antoko politika isany mandrafitra ny K3F.
jeudi, 26 avril 2018 12:45
CJSOI Djibouti: 11ème Jeux de la CJSOI
Tanterahina ao an-toerana andiany faha-XI amin’ny lalaon’ny tanora sy fanatanjahantena aty amin’ny ranomasimbe indianina. Mitarika ny delegasiona malagasy any an-toerana ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahatena Dr Randriamosarisoa Jean Anicet.
Natao ny Alakamisy 19 aprily 2018 ny lanonam-panokafana, natrehin'ny filohan'ny Repoblikan’i Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh.
jeudi, 26 avril 2018 09:50
Antsirabe: Mihetsika koa ny Vahoaka
Mifamotoana amin’ireo Solombavam-bahoaka ho an’ny fiovana eo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena izy ireo amin’ity anio ity. Milanja sorabaventy ireo olona maro tonga.
Hita amin'izany ny hoe miala Rivo Rakotovao, tsy matahotra Kung-fu, tsy misy fandriam-pahalemana, lafo ny vidim-piainana, leo kolikoly.
jeudi, 26 avril 2018 09:44
Après la tristesse et l’euphorie, suite aux affrontements du 21 avril, on entre dans une phase de doute et de questionnements: quelle suite donnée aux évènements.
Dans une déclaration conjointe, les responsables des différents composants des forces de l’ordre, Ministre de la Défense, Ministre de la sécurité publique (Police) et Secrétaire d’Etat responsable de la Gendarmerie nationale, tout en se retirant de toutes opérations visant à mater une émeute populaire se disent favorable à une concertation des différents acteurs politiques.
Ils sont pour une solution rappelant la réunion du Panorama dans les années 90 ayant permis à une sortie de crise et la naissance de la 3ème République.
Mais le contexte est « légèrement » différent, la Communauté internationale (occidentale) n’occupe pas la même place que maintenant.
jeudi, 26 avril 2018 08:22
LTP Mahajanga: Nakaton'ny mpianatra ny sekoly
Vavahady mihidy, mpianatra mihorakoraka miaraka amin'ny sorabaventy no tazana teny amin'ny Lycée Technique Professionnel Mahajanga omaly maraina alarobia 25 avrily teo. Mpianatra manao fitakiana ny amin'ny hialan'ny Talem-paritry ny fampianarana teknika eto amin'ny faritra Boeny.
Antony maromaro no mahatonga izao fitakian'ny mpianatra sy mpampianatra vitsivitsy izao, anisan'izany ny fahatapahan'ny jiro eo anivon'ny sekoly sy ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra FRAM.
jeudi, 26 avril 2018 07:22
Fianarantsoa: Mampiantso ny hery velona rehetra ny FFKM
Omaly alarobia tamin'ny telo ora tolakandro no nanatanterahan'ny FFKM ny fivoriana niantsoany ireo mpisehatra ara-politika rehetra misy eto Fianarantsoa manoloana ny zava-misy mivoatra amin'izao fotoana izao.
Raha ny fizotry ny hetsika teo amin'ny Kianja Ampasambazaha ny talata dia mitohy ny fanambarana isan-tokony ho fiarahana mientana sy ifanohanana. Mbola mitazona ny heviny ny K3F raha ny fampitam-baovao farany. Mifanantona amin'ny anaran'ny antoko kosa ireo mpisehatra ara-politika vokatry ny famoriam-bahoaka nisy omaly.
Tohin'ny fanentanana nataon'ny CFM ny andron'ny alatsinainy teo arak'izany ity fiantsoana fivoriana notanteraha'ny FFKM ity. Miandalana ny fampitana ny tatitr'izany.